Haddaad mooday in Imaaraadka caawinayaan Somalia, ku qanac sawirradan - Caasimada Online
Home Warar Haddaad mooday in Imaaraadka caawinayaan Somalia, ku qanac sawirradan
Haddaad mooday in Imaaraadka caawinayaan Somalia, ku qanac sawirradan
Nairobi (Caasimada Online) – Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa baabuur xamuul oo deeq raashiin ay ka buuxaan gaysay madaxtooyada dalka Kenya, ayada oo loogu deeqay dadka abaaraha ay saameeyeen ee dalkaas ku nool.
Raashiinkan oo lagu sheegay inuu yahay illaa 150 tan ayaa safiirka dalkaas waxaa madaxtooyada kaga guddoomay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, sida ka muuqda sawirro uu baahiyey taleefishinka CGTN Africa.
Waxaa xusad mudan in abaarta ku dhufatay Soomaaliya ay boqol mar ka darran tahay kana xanuun badan tahay tan Kenya, mana jiraan wax gurmad ah oo Imaaraadka ay illaa iyo hadda lasoo gaareen Soomaaliya.
Kaaga sii daran’e, raashiinka ay ugu deeqeen Kenya waxay geeyeen xarunta adaxtooyada, taasii ka carreysiisay dad badan oo Kenyan ah, oo u arkay in Imaaraadka ay sidaas u sameeeyeen kaliya is-tustus.
Imaaraadka ayaa faro-gelin kusoo sameeyeey Soomaaliya wixii ka dambeeyey markii Turkiga usoo gurmadeen dalkeena, taasi oo dad badan ay u arkeen inay tahay inay doonayaan in Turkiga ka saaraan Soomaaliya oo aanay dhab ka ahayn inay gacan qabtaan Soomaalida.
Wixii markaa ka dambeeyey waxay ku dhex milmeen siyaasadda Soomaaliya, taasi oo caddeyn u noqotay in dantooda ay u joogaan Soomaaliya oo aysan dan Soomaaliyeed ka shaqeyneyn.
Sawirrada cusub ee dalka Kenya kasoo baxay ayaa ah caddeyntii ugu dambeysay arxan-darrada Imaaraadka, oo walaalahooda muslmiinta Soomaaliyeed abaarta ku dhufatay aan ka damqan balse raashiin is-tustus ah ula orday Kenyaatiga.